Magaalooyinka dalka oo maanta laga wada ciidayo | Universal Somali TV
Magaalooyinka dalka oo maanta laga wada ciidayo
Waxaa maanta si isu mida looga ciidaya magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo inta badan deegaanada Soomaalida, ka dib markii saqdii dhexe ee xalay siyaabooyin kala duwan loo baahiyay in goobo kala duwan, oo dalka ahi laga arkay bilashada bisha Shawaal.
Wariye-yaasha ayaa soo warinaya in Magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka ee dalka si isu mida looga wada ciidayo, inkastoo Ciiddaan ay ku soo beegan tahay, xilli xaalad adag oo ka dhalatay Coronavirus ay dunadii kala xir xirtay.
Somaliland, Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo dhulka ay Al Shabaab maamusho ayaa si aan khilaaf lahayn looga ciidaya maanta.
Puntland ayaa goor dambe oo xalay ahayd u hoggaansan tahay awaamiirtii Dowladda Federaalka, ee ahayd in Sabtida maanta ay tahay maalinta 1aad ee Ciidul Fitriga.
Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed, Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland ayaa isna xilli dambe oo xalay ahayd ka soo muuqday Telefishinka Somaliland, isagoona ku dhawaaqay in Sabtida ay tahay maalinta 1aad ee Ciidda.
Magaaalada Jigjiga ayaa sidoo kale saqdii dhexe ee xalay waxaa Masaajidda ku yaala laga maqlay Takbiirta.
Gobolka Soomaalida Kenya degto ee Waqooyi Bari iy Magaalada Nairobi ayay iyana u tahay maalinta 1aad ee Ciidul Fitriga. Ciidaan ayaa ka duwan kuwii hore, maxaa yeelay inta badan goobihii lagu tukan jiray ayaan lagu tukan, dadkuna waxay Salaadda Ciidda ku tukadeen guryahooda.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaan maanta laga ciideynin, ka dib markii Xukuumadda Djibouti ay xalay ku dhawaaqday inaanay jirin cid aragtay bisha, sidaasi daraadeedna ay Sabtida maanta ahi kaamil yeeli doonaan 30-ka maalmood ee bisha Ramadan.
Tani ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli dunida Muslimka maanta laga wada sooman yahay, haddii aynaan dowladuhu xalay xaqiijin curashada bisha Shawaal.
Dunida ayaa sanadkan looga ciidaya si ka duwan, sidii caadiga ahayd, marka aad eegto sida uu magaalooyinka iyo caalamkiiba uu u saameeyay fayriska xowliga ku baahaya ee Coronavirus.
Kan-xigaCoronavirus oo si weyn ugu fiday Bayd...
Kan-horeDeni oo isku shaandhayn ku sameeyay G...
55,405,863 unique visits